प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सवमा केक बोक्न हेलिकोप्टर चार्टर्ड ! – Karnalisandesh
प्रधानमन्त्रीको जन्मोत्सवमा केक बोक्न हेलिकोप्टर चार्टर्ड !
प्रकाशित मितिः ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार २२:२३ February 23, 2020
ओलीले गाउँपालिकाको ४ को इवास्थित आफू जन्मेको घरमा धुमधामका जन्मोत्सव मनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीका जन्मोत्सवका लागि आज आठराई गाउँपालिकाले सार्वजनिक विदा दिएको थियो ।
रातोपाटीका अनुसार रोचक त के छ भने प्रधानमन्त्री ओलीका जन्मोत्सवका लागि केक बोक्न हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरिएको दावी गरिएको छ। यतिबेला केक बोक्न हेलिकोप्टरको प्रयोग भएको भनिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। जमा प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचनसमेत भएको छ।
साथै जन्मदिनको केक नेपालको नक्सा आकारको बनाएर काटिएको विषय पनि यतिबेला भाइरल बनेको छ। नेपालको नक्सा नै बनाएर काटिनुलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले राष्टियतासँग जोडेर प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरिरहेका छन्।